မင်းအိပ်စက်နေရောပေါ့ . . .။
ညမဆန်စွာ အပြုံးတုတွေ တပ်ဆင်လို့
ဒီအခန်းထဲမှာ ငါ . . .
မိုးတိမ် အကြားက လမင်းပြူတော့
ရွာဝေးလေးရဲ့ ညက . . .
ရင်ခွင်ထဲကို အရောက်ပြန်ခဲ့မယ် ။
+ ရိုးမြင့်ကောင်းသစ်(12:15pm 30.5.06 ၊ ပခုက္ကူမြို့) +
Labels: home, life, ရိုးမြင့်ကောင်းသစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 2:31 AM | Permalink | Comments
ဒါဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆက်မရေးဖြစ်တော့တဲ့
ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် ခိုးဝှက်နမ်းရှိုက်နေခဲ့မိသလား
"တော်ဖလာ" ရဲ့ လှိုင်းလုံးတွေက
ဒါ တိုက်ရိုက်ပြနေတဲ့ ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ပဲ၊
ကိုယ့်ဂိုးထဲ ၀င်သွားတဲ့ ဘောလုံးတွေအားလုံး
မကုန်သေးတဲ့ စားလက်စ ရေခဲမုန့်ကို
အမှိုက်ပုံးထဲ သူမက ထိုးထည့်ပစ်လိုက်ပြီ။
ဟိုး . . . .အဝေးကို။
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:36 AM | Permalink | Comments
အဲဒီတုန်းက ညနေပေါ့ . . . .
(အစတုန်းက ညနေလို့ ပြောရင်လည်း ရတာပဲ)
တစ်သားမွေးရင် တစ်သွေးလှတဲ့ ညနေ
ခံစားချက်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး ဖိတ်လျှံတာတောင်
နောက်ဆုံးညနေတဲ့ . . . . ၊
ဘယ်လောက်ထိ တိုးဝှေ့ကြည့်ရဦးမှာလဲ . . .
နောက်ဆုံး ညနေတဲ့ . . . ။ ။
+ အလင်းနစ် +
Labels: life, အလင်းနစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:35 AM | Permalink | Comments
ရေဆန်ကို ဆန်တက်လည်း ဒီအတိုင်း
ရေစုန်ကို မျောလည်း ဒီအတိုင်း
ပြက္ခဒိန်တိုင်း ပြသဒါးနဲ့ ရက်ရာဇာ ကတော့ ပါစမြဲပဲ
ကိုယ်နမ်းဖို့ မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူရဲ့ ပါးတစ်ဖက်ပဲ မဟုတ်လား
အဲဒါကို လက်ခံလိုက်ဖို့ ခက်နေတာပဲ။
မနေ့ကထက် ပိုညံ့ဖျင်းလာတဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါနေဦးမယ်
"အသဲကွဲသီချင်း"တွေလည်း မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင် ခေတ်စားနေဦးမယ်။
ဖျတ်ကနဲ ခိုးနမ်းဖူးတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ပါးတစ်ဖက်ပေါ်က
ပြန်မရတော့မယ့် ရနံ့ဟောင်းလေးတွေလည်း ပါနဦးမယ်။
နောက်တကြိမ် ပြန်ဖတ်ခွင့် မရှိတော့တဲ့
သူမရဲ့ ရယ်မောသံ လွင်လွင်လေးတွေလည်း ပါနေဦးမယ်။
"ပြီးပါပြီ" လို့ စာတန်းထိုးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလည်း ပါဦးမယ်။
ရုံတင်တဲ့ကားက နပိုလီယံရဲ့ "မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး" ဆိုလား
အဲဒါကို လက်ခံလိုက်ဖို့ ခက်နေတာပဲ . . .။
လက်ခံလိုက်ဖို့ ခက်နေတုန်းပဲ . . . .။
Labels: life, love, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:31 AM | Permalink | Comments
လမ်းပျောက်ခဲ့ပြီ . . . .။
Labels: home, life, အလင်းနစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:27 AM | Permalink | Comments
သူချမ်းသာကြီးပွား နေလိုက်ပုံများ ...မနာလိုချင်စရာ..။
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:20 AM | Permalink | Comments
သိပ်အစွဲအလမ်းကြီးလွန်းတဲ့သူငယ်ချင်းလေးမို့ရင်းရင်းနှီးနှီးလေး နေလိုက် ပြန်ရင်လည်း ရင်စေ့ကြယ်ရောင်စုံတွေ စောစောစီးစီး ကြွေလာလေမလား စိုးရိမ်လွန်,လွန်လာလို့ ခေါင်းပဲခါလိုက်ရမလား ခေါင်းပဲငြိမ့်လိုက်ရမလား ကိုယ်နဲ့ ကိုယ် အငြင်းပွားနေမိရင် ကောင်မလေးက မကျေမနပ် နှုတ်ခမ်းလေး စူရင်စူ၊ ခါးလေးထောက်ရင် ထောက်၊ ဖနောင့်လေးဆောင့်ရင် ဆောင့်၊ မျက်စောင်းလေးထိုးရင်ထိုးနဲ့ ချစ်စနိုး စိတ်ကောက်ပြဦးမယ်လို့ ပြုံးလိုက်ရင်း မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာ အလျားလိုက် ရှည်မျောထွက်နေရဦးမယ် ။
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:18 AM | Permalink | Comments
၁။ ကျွန်တော်တွင် “မနက်ဖြန်”ဟု ခေါ်သော ကြောင်ကလေးတစ်ကောင် ရှိပါသည်။ သူကလေး၏ နာမည်ကို ခေါ်လိုက်တိုင်း အလန့်တကြား ခေါင်းလေး ထောင်ကြည့်တတ်၍ ထိုအမူအကျင့်လေးကို ကျွန်တော်အလွန် သဘောခွေ့ပါ သည်။ သူကလေးတွင် ၀ှက်ထားသော လက်သည်းတစ်စုံရှိပြီး စိတ်မရှည်သော အခါများတွင် ထုတ်၍ ကြည့်နေတတ်ပါသည်။
၂။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပွတ်တီးပွတ်သပ် နေချင်စိတ်ကလေး ပေါက်နေတတ်ပြီး ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို ကုတ်ခြစ်၍ ထွက်ပြေးသည့်အခါလည်း ထွက်ပြေးတတ် ပါသည်။ စိတ်နှင့်စိတ်၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရာတွင်လည်း စနစ်တကျ ဖုံးအုပ်တတ်သော အလေ့အထလေးလည်း ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အများက ကြွက်ကိုကြောက်လို့ ဟု သမုတ်တတ်ကြပါသည်။
၃။ သူကလေး၏အသံမှာ တစ်ခါတစ်ရံ တယောထိုးသံထွက်၍ တစ်ခါတစ်ရံ မိုးကြိုးပစ်သံ ထွက်တတ်ပါသည်။ သူမတူအောင် ထူးချွန်မှုတစ်ခုမှာ သူကလေး၏ မာနတစ်ခွဲသားလေးကို အသံမမည်အောင် လှုပ်ရမ်းတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သူ၏အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ကာနီးအချိန်များတွင် ပို၍ တိတ်ဆိတ်တတ်ပါသည်။
၄။ ကျွန်တော့်အိပ်ရာပေါ်တွင် သောက ခြစ်ရာဆင်းရာများ တွေ့ရသည့်အခါ တိုင်း “ဈေးပေါပေါနှင့် ရောင်းပစ်မည်”ဟု ကြိမ်းဝါးမိတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ များတွင် သူသည် တွေဝေခြင်းများ၌ ရက်ရှည်လများ ဖျားနာတိတ်ဆိတ်သွား တတ်ပါသည်။
၅။ ယခု...... သူကလေး တိတ်ဆိတ်နေပါသည်။ ဖျားနာ နေ၍လား........၊ သူ့အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ဖို့လား......။ဖျားနာနေတဲ့ သူ့အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ဖို့ လား.....၊ သူ့အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ဖို့ ဖျားနာနေတာလား.............။ကျွန်တော် သေချာမသိပါ။ သေချာသည်မှာ...... သူကလေး.... တိတ်ဆိတ်နေပါသည်။ ..သူ..က..လေး.....တိတ်..ဆိတ်..နေ..ပါသည်..........................။
Labels: life, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:16 AM | Permalink | Comments
လမ်းဆုံးဘူတာလေးကို ဆိုက်ရောက်မလာတဲ့ အနှေးရထားတစ်စီ...